Poizina Ho An’ireo Rosiana Mpanao Gazety Ny Labiera & Twitter Afangaro · Global Voices teny Malagasy
Voadika ny 16 Avrily 2013 12:04 GMT
Fitaovam-pitaterana mora sy azo antoka hifamezivezena ao Rosia ny fiarandalamby, indrindra fa raha ampitahaina amin'ireo arabe ratsy dia ratsy ao amin'ny firenena. Firenena lehibe i Rosia ary andaniana ora maro ny dia manasaraka ireo tanan-dehibe (na mety ho andro mihitsy aza). Noho ireo fahasarotana ireo, efa zava-mahazatra loatra araka izany ho an'ny mpandeha sasany ny misotro in-dray na in-droa mba handaniana ny andro. Indraindray aza dia mihoatra noho io ho an'ny olona sasany. Araka ny fanambaràna iray avy amin'ny polisy Rosiana [ru], izany indrindra no nitranga tany anaty fiarandalamby iray mpandeha alina avy ao Saratov mankany Moscow ny 11 Aprily 2013 lasa teo, raha navoakan'ireo manmpahefana natao hampihatra ny lalàna ka notazoniny i Svetlana Lokotkova, mpanao gazety iray avy amin'ny gazetiboky tsy miankina The New Times, taorian'ny tatitra hoe “misy mpandeha iray mamo tampon'ny alikaola manelingelina ny filaminana ankapobeny.”
Tsy tara tamin'ny valin-kafatra i Lokotkova, izay iray amin'ireo mpanara-maso ny fifidianana nandeha nankany Saratov hijoro vavolombelona taminà fanadihadiana iray mikasika ny fifidianana natao tamin'ny Oktobra 2012, hakàna izay ho solotenam-paritra ao amin'ny parlemanta, fa nampahafantatra ny iray amin'ireompifandray aminy[ru] avy amin'ny Ekho Moskvy fa izy tenany mihitsy no niantso ny polisy, noho ny fihetsika tsy dia tsara loatra nataonà lehilahy iray isan'ny mpandeha tao, saingy izy indray no nosamborin'ny polisy:
Nobedain'izy ireo tamin'ny tanako sy ny tongotro aho ary dia nanipy ara-bakiteny ahy tao amin'ny paositry ny polisy. Raha nanandranany hivoaka aho, nateren'izy ireo ara-bakiteny tamin'ny varavarana ny tànako, mangana daholo ny tànako manontolo. Nompaina sy nantsoin-dry zareo tamin'izao karazana anarana rehetra izao aho.
Taty aoriana kely i Lakotkova dia nampakatra sary tao amin'ny pejiny Facebook [ru] sy Twitter [ru], nampiseho ireo ratra izay nohamafisiny fa azony fony izy teo an-tànan'ny polisy.
Ny sasany tonga dia nihazakazaka niaro azy. Nanoratra i tsarfree, mpampiasa Twitter (nampiasa ny fnampin'anaran'i Lokotkova ho tenifototra ) :
Nanjary niharan'ny fihantsiana ara-politika i #Lokotkova. Noheverina hitondra porofo eo anatrehan'ny fitsaràna izy mikasika ireo fifidianana tany amin'ny Faritr'i Saratov.
Na teo aza ireo fanamafisana nataony, nihen-danja ny fitokisana an'i Lokotkova, rehefa nalefan'ny fahitalavitra mpanohana an'i Putin, NTV, ny “lahatsary iray avy amin'olon-tsotra” [ru] nahitàna an'i Lokotkova tao amin'ny paositry ny polisy.
Tao anatin'ilay lahatsary, hita ho tsy mahazaka tena i Lokotkova, mikiakiaka, ary sahirana milaza izay lazainy. Tao anatin'ilay tatitra, nandefa ihany koa ny NTV bitsika roa [ru] avy amin'ny kaontin'i Lokotkova taloha kely monjan'ilay fisehoan-javatra.
Miha-tiako hatrany hatrany ny mponin'i Saratov. Izao indray ka ny fahaizany mandray vahiny, mampihaiky (tsy anatin'izany i Inozemtzev lehiben'ny Kaomisionam-Pifidianana ), dia izao indray ny fomba fitondran'ny [sasany] rehefa any anaty fiarandalamby #saratov
Afaka tamin'ny serisery ratsy noho ny hatsiaka taty anaty fiarandalamby #saratov-moscow (saratov-mosko) aho, fiara faharoa amin'ny laharana. Nampiasa ny fomba tranainy. Mahery ny mponin'i Saratov 🙂
Tsy nanafina ny ahiahiny ilay mpanolotry ny NTV teo am-pamakiana ireo bitsika nalefan'i Lokotkova, tamin'ny fomba fanonona feno eso ny hoe “fahaizany mandray vahiny, mampihaiky,” “fomba fitondra,” and “fomba tranainy,” amin'ny fonosohana ny hoe (izay azo eritreretina ho manakiky ny tena izy) tsy nahalefitra ny tsy hisotro i Lokotkova, araka izay nohamafisiny, fony teny ambony fiarandalamby. Fomba fijery izay toa iraisan'i Fish12a, mpampiasa LiveJournal :
Efa tsara raha mba nianatra nandrakitra anaty lahatsary ny olona tratrany ny polisintsika. Amin'izay hitranga avy hatrany daholo ny lainga afafin'ireny mpanao gazety tsy mendrika ireny. Tokony ho nakombony ny vavany, satria ilay lahatsary dia nalefa fotsiny tamin'ny fahitalavitra ho valin'ny fiampangàna nataon'ilay mpanao gazety hoe “fihantsiana” sy “herisetran'ny polisy.”
Mahatsikaiky, tsy tafita ny ezak'i Lokotkova ho eo amin'ny toeran'ny niharan-doza tamin'ny fomba fanao tafahoatra avy amin'ny polisy sy ny fihantsiana ara-politika satria nampiasain'ny manampahefana ireo fitaovana roa faran'izay ankafizin'ny mpanohitra: kamerà smartphone sy Twitter.
Mety hiatrika fitànana am-ponja 15 andro i Lokotkova noho ny “hagaigena bitika,” ary mety hisy fiantraikany amin'ny vinavinany hiverina any Saratov izany, toerana voatondro hijoroany vavolombelona indray ny 16 Aprily, momba ny hosoka tamin'ny fifdianana .